Local Branches – Myanmar Independent Living Initiative (MILI)
Ayeyarwaddy Region	East Bago Region	Mandalay Region	Naypyitaw Region	Sagaing Region	West Bago Region	Yangon Region	Kachin Sate	Magway Region	Mon State	Rakhine State	Shan State
Kyon Pyaw Branch
U Tin Tun Aung
Damayone Library, Shwenantthar Road, Aungsan Quarter, Kyon Pyaw.
Myaung Mya Branch
Daw Ei Ei Phyu
No(7) territory, No(4) Road, Near Tax-free Shop, Thitdama Thidaguu Mitter Yitethar Monestary, Myanugmya.
Nga Pu Daw Branch
Thapyaenyo Road, South Quarter, Nga Pu Daw.
Tha Baung Branch
U Thanug Htike
Htansinhla Village, Thar Baung Township.
Thin Gan Kone Branch
Thonegwa Village, Group of Makyipinthonegwa Village, Ngaputaw Township.
Wa Ke Ma Branch
U Aung Min Tun
No(41), Nilar Road, Padanmyar Quarter, Wa Ke Ma.
No(220), AungSan(6) Street, Yekyi.
Kyauk Kyi Branch
U Aung Nyo Win
Shwepyaythar Village, Goup of Tawpu, Kuauk Kyi.
U Aung Si Thu
No(133), Bago Road, Kyatthonkhin(1) Quarter, Oktwin.
Pel Nwel Gone Branch
U Pyae Min Htet
No(101), Industrial Road, Taphinshwehtee North Quarter, Pel Nwel Gone Township.
U Lin Naing
Sheasuang Computer, No(2) Quarter, Taungoo.
Yonepwae Street, Northwest Quarter, Gyobingauk Township, Bago.
U Zaw Tun Oo
Conner of Tanintharyee Road and Lamine Road, Infront of (106) Army, Mawkanin Village, Lamine Township.
Yinnyein Township, North Shop Road, (12) Quarter.
ဇွန်လတွင် ကျရောက်သော မီလီဝန်ထမ်းများ၏ မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
ဇွန်လတွင် ကျရောက်သော မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ ၀န်ထမ်းများဖြစ်သည့် ဦးမျိုးနိုင်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်စုထွေးနှင့် ဒေါ်အိမေလွင် တို့၏ မွေးနေ့ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၁.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ ရှေ့ဆောင်ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခမ်းနားတွင် Head of Office ဦးမောင်မြင့်က မွေးနေ့ရှင်များအတွက် ဆုတောင်းစကား ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် Project Coordinator ဦးဇေယျာမင်း Admin Officer ဦးကြည်ထွန်းနှင့် Senior Office Staff ဦးဇေမင်းလွင်တို့က မွေးနေ့ရှင်များအတွက် အမှတ်တရစကားများ ပြောကြားခဲ့သည်။ MILI Coordinator ဒေါ်ယုယုဆွေက မွေးနေ့ရှင်များ အတွက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး မွေးနေ့ရှင်များမှလည်း အမှတ်တရ စကားများ ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။ Admin Officer ဦးကြည်ထွန်း၊ Inclusive Trainer ဒေါ်မြင့်မြတ်စံ၊ Audio Engineer ကိုစောမနိုင်းဖောင် တို့က မွေးနေ့ရှင်များ အတွက် အမှတ်တရ သီချင်းများဖြင့်သီဆို ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ မွေးနေ့ရှင်များအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ရိုက်ချက် အစီအစဉ်ကို Project Assistant ဒေါ်နုနုဝင်းက ဦးဆောင်စီစဉ်ပြီး မွေးနေ့ပွဲကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။
Daw Ei Thant Zin
No(24/13), Pearl Road, Yaeaye Quarter, Taunggyi.
Asin Aw Tha Hta
Hospital Road, Roberd Church, Mingone Quarter, Kachin State.
Daw Zar Zar Lwin
Theininn Quarter, Mohnyin Township, Kachin State.
Daw Khin San Wai
No (48), Pyay Road, MinyeKyawSwar Quarter, Tikekyi Township.
မဟာအောငျမွေ မွို့နမဟာအောငျမွေ မွို့နမဟာအောငျမွေ မွို့နမဟာအောငျမွေ မွို့နမဟာအောငျမွေ မွို့နမဟာအောငျမွေ မွို့နမဟာအောငျမွေ မွို့နမဟာအောငျမွေ မွို့နမဟာအောငျမွေ မွို့နမဟာအောငျမွေ မွို့နမဟာအောငျမွေ မွို့နမဟာအောငျမွေ မွို့န
Mo Gok Branch
Daw Yu Li Ya
Yaepottayar Village, Mo Gok Towship, Mandalay.
Ya Me Thin Branch
Shwesegon (2) Street, Shwesegon Quarter, Ya Me Thin.
Daw Khaing Mar Lin
Cherry Street, Myoma Quarter, Chatthin Tikenal, Kantbalu Township, Sagaing.
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့၏ MAM project လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိ ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းရုံးခွဲရှိ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ၃ ရက်တာ ခေါင်းဆောင်မှုမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကို ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့ ရွှေတောင်တန်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်တန်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲမှ ဒုတိယအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ၊ M&E Officer နှင့် Zone Coordinator တို့က သင်ကြားပို့ချခဲ့ရာ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ရုံးခွဲရှိ အလုပ်အမှုဆောင်များအားလုံး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
Mrauk U Branch
U Oo San Kyaw (khitmeneepya), Minbarkyi Street, latkoutzay Quarter, Mrauk U.
No(272), U Oaktama Street, Myoethit Quarter, Ponnagyun Township.
U Nay Soe Lin
Aungsaetanar (B), Between9Street and 10 Street, Aywayyarthukha Kyaunghtike, Magway.
Daw Shwe Zin
Magway Township, Megyaungye Tikenal, Magway.